အောက်တိုဘာ 2018 | ananda
Home / Archives for အောက်တိုဘာ 2018
Archives for အောက်တိုဘာ 2018
သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်တွင် hoco. ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ရရှိနိုင်မည့်အခွင့်အရေး။ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ။ ။ ယခုနှစ်သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်ကာလတွင် ananda (အနန္တ) မှ hoco. ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ရှိ ပြည်သူလူထုနှင့် မီးထွန်းပွဲတော်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့အတွင်း ananda (အနန္တ) ၏ mifi သို့မဟုတ် router စက်များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုကြသော ananda (အနန္တ) သုံးစွဲသူများသည် ကြိုးမဲ့စပီကာ၊ နားကြပ်၊ Headphone နှင့် Power Bank များပါဝင်သော hoco. ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း ၁၄ ခုထဲမှ တစ်ခုကို ကံစမ်းနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို […]